Semalt - Esi ewepu ibe weebụ?
Mara mma Oke bu akwukwo ogbagba Python ka ejiri wepu ibe weebụ site n'inwe osisi parse site na XML na HTML akwụkwọ. A na-eji nchịkọta weebụ, usoro nke iwepụta data site na weebụsaịtị na ibe, na-ejikarị na nchịkọta data na njikwa. N'ọtụtụ ọnọdụ, asụsụ mmemme Python bụ ihe dị mkpa na sayensị data.
Eke Ọgba 3 nwere ngwaọrụ nchapu na modul ị nwere ike itinye na ọrụ nlekọta data gị. Ugbu a na-agba ọsọ dị ka Obere Mmasị 4, modul a dakọtara na Python 3 na Python 2. 7. Ihe Mgbu Ocha 4 modul nwekwara ike ịmepụta osisi parse maka ofe na-adịghị emechi. Na nkuzi a, ị ga-amụta otú e si ehichapụ ibe ma dee data scraped na faịlụ CSV.
Iji malite, melite ihe nkesa ma ọ bụ ọnọdụ Python na-ejikọ na mpaghara gị na PC. Ikwesịrị ịwụnye Mmasị Mara Mma na usoro nzaghachi na akụrụngwa gị. Ịmara na ị na-arụ ọrụ na modul abụọ bụkwa ihe dị mkpa. Ịmara na mkpado HTML na ọdịdị dịkwara uru bara uru.
Ịghọta data gị
N'ebe a, a ga-eji data sitere na National Gallery of Art mee ihe iji nyere gị aka ịghọta otu esi eji Mara Mma Mkpụrụ 4. Nnukwu Ụlọ Osisi nke Art gụnyere nke 120,000 iberibe nke ihe ruru 13,000 artists. Ihe eji eme nka bu Washington D. C, United States.
Nbudata ntanetị na Web Beautiful na obụghị mgbagwoju anya. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-elekwasị anya na akwụkwọ ozi Z, kaa ma detuo aha mbụ na ndepụta ahụ. N'okwu a, aha mbụ bụ Zabaglia, Niccola. Maka ichogidesi ike, gosi ọnụ ọgụgụ nke ibe na aha onye ọrụ ikpeazụ na ibe ahụ.
Olee otú ị ga-esi bubata Ọchịchọ na Mara Mma Ọbá akwụkwọ Soup
Iji bubata ụlọ akwụkwọ ọsịị, rụọ ọrụ Python 3 usoro mmemme. Lelee iji jide n'aka na ị nọ n'otu ndekọ ahụ na ebe mmemme gị. Gaa iwu na-esonụ iji malite. my_env / bin / rụọ ọrụ.
Mepụta ohuru ohuru ma malite ibubata ihe di mma na akwukwo ndi ozo. Ọchịchị arịrịọ a ga-enye gị ohere iji HTTP n'ime usoro Eke Ọgba na nhazi usoro. N'aka nke ọzọ, ogwu dị mma, na-arụ ọrụ iji wepụ peeji nke ngwa ngwa. Jiri bs4 ịbubata Akwa Oke.
Otu esi anakọta ma kpoo ibe weebụ
Iji ikikere nata URL nke ibe mbu. A ga-ekenye URL nke ibe mbụ na peeji nke agbanwe. Wụpụta ihe mara mma nke rịọrọ ma wepụ ihe ahụ n'aka Parshon.
Na nkuzi a, ebumnuche bụ ịnakọta njikọ na aha ndị na-ese ihe. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịnakọta ụbọchị ndị ọkachamara na mba. Maka ndị ọrụ Windows, pịa nri aha mbụ nke onye omenkà. N'okwu a, jiri Zabaglia, Niccola. Maka ndị Mac OS, pịa "CTRL" ma pịa aha. Pịa "Nlele Element" menu na mmapụta na ihuenyo gị iji nweta ihe nchọgharị weebụ. Bipụta aha ndị na-ese egwu iji mee ka Ochie Obụp jiri osisi na-eto ngwa ngwa.
Wepụ njikọ njikọ
Iji wepu njikọ njikọ ala na ibe weebụ gị, nyochaa DOM site na ịpị aka na mmezi. Ị ga-achọpụta na njikọ dị n'okpuru tebụl HTML. Jiri Mmọ Mma, jiri "usoro decompose" wepụ mkpado site na osisi parse.
Esi esi dọpụ ọdịnaya site na mkpado
Ịkwesighi ibipụta akara njikọ niile, jiri Mpi Mara Mma wepu ihe site na mkpado. I nwekwara ike ijide URL ndị jikọtara ya na ndị na-ese ihe site na iji Mmasị Obere 4.
Ịdebe data weghaara na faịlụ CSV
faịlụ CSV ga-enye gị ohere ịchekwa data arụpụtara na ederede dị larịị, usoro a na-ejikarị mee ihe maka akwụkwọ datasheets. A na-atụ aro maka ịmepụta ederede ederede na Eke Ọgba.
A na-eji nchịkọta weebụ wepụ ibe ma nweta ozi. Na-echebara weebụsaịtị ndị ị na-ewepụta ozi sitere na. Ụfọdụ ebe nrụọrụ weebụ siri ike na-egbochi ntinye data weebụ na saịtị ha. Iji kpochapu akwukwo ya na Ocha Mma na Eke Odi 3 bu ihe di mfe Source .